Isihloko liyakhuluma ngokuphela isikhathi samanje emikhakheni ehlukahlukene yesayensi, ngalokho-ke nokuthi kungaba isihlobo.
Kukholakala ukuthi ithu yisidala gogo zazinjengethusi nje asibuke, bese kuphela kakhulu ukude. Futhi zonke evamile kithi womuntu izimfanelo, nezahlulelo Psychology baye bathola kuphela obhekwe zinhlobo Homo sapiens. Kodwa nge kucabanga debatable. Ngokwesibonelo, ososayensi batholé amathuna wawobaba yobudala anthropoid zeminyaka eziyizigidi ezimbalwa, futhi kwatholakala ukuthi ube yindawo yami yokungcwaba ungenise ngisho nezimbali ezihlelwe ngayo!
Nge zonke Eqinisweni Amazing - kuyiqiniso. Ngcwaba atholakele iminonjana impova amaqoqo ezikhula kwenye indawo. Ngakho, okhokho bethu base kakade athuthukile sewazi ngezimbangela kwelizayo. Mhlawumbe kungenxa ekubeni nekhono lokuhlaziya futhi umcabango kukhona komugqa phakathi isilwane futhi indoda.
Isikhathi akunakubangelwa ezihlukahlukene izinto futhi eyala, ezifana physics, Psychology, ifilosofi, izincwadi nezobuciko. Ngomqondo classical njengoba value kunqunywa esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini inqubo: noma ukubola izakhi enemisebe e- iwashi le-athomu , noma umnyakazo planethi emhlabeni axis awo - ushintsho kosuku. Kulesi sihloko sihlaziya ngokuningiliziwe ngamunye wabo. Ake uqale nge kakhulu elula.
Ngo Metrology isikhathi kwenziwa imingcele ezintathu. Ngokwe inkomba-eksisi, lapho ukuzimisela senzeka kwezinye isikali noma uyobala kuye labo noma enye idatha. Ngokwesibonelo, wonke amakhalenda eyaziwa, amawashi, amawashi, isikhathi zendawo jikelele.
Eyesibili uhlobo - isihlobo. Kulokhu, nesilinganiso senzeka phakathi izikhathi imicimbi emibili. Ngokwesibonelo, phakathi ekuseni Awakening futhi sokulala.
Futhi inketho lwesithathu nezokugcina - subjective. It is kulinganiswa ngo eziningana ezahlukene imvamisa izinqubo. Ngamafuphi nje, lo icala lapho, kuye ngokuthi isimo, isikhathi umuntu kuthatha izinga ezahlukene, subjective ngaye.
Kuyinto izibonelo ezivame kakhulu ezifana complex concepts. Kodwa kungenzeka ukuchaza isikhathi? Phela, leli ingenye izakhiwo jikelele ndaba, kanye isikhala.
Uma wenziwa yini sichazamagama sakho, uzobona ukuthi umlobi ngamunye futhi osebenza yize ngumngane wami oseduze, kodwa incazelo yokuthi isikhathi. Ngokwesibonelo, Ozhegov wanikeza incazelo elandelayo: ". Isikhathi Igebe obuhlukahlukene, okuyinto wafeza okuthile, uhlu lwabantu abalandelanayo amahora, izinsuku, iminyaka" Yileso definition kwezincwadi elithi "isikhathi."
Kulesi isayensi nzima ukuthi, futhi umbuzo ukuthi ngesikhathi esinjalo, njalo sefilosofi iyaphendula ngendlela yalo. Kodwa ngenhlanhla, akukho definition owamukelwa. Ngokwe-encyclopedia, kuyilapho ifilosofi - kuba Yiqiniso engelapheki imicimbi, okuyinto babesuka esidlule ngokusebenzisa samanje futhi eluse nasesikhathini esizayo.
Le nkinga ucele ososayensi lasendulo, futhi izingxabano bengayeki kuze kube yilolu suku, ineminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa. Futhi ngomunye wabokuqala ubani isikhathi sokucabanga ngakho, laziwa nge uPlato.
Ngokwalokho akuloba nemibono, kuyilapho ifilosofi - ke (yencazelo wanikezwa kubo njengoba) ". Into efana ezihambayo engunaphakade ' Ngemva kwesikhashana imibono yakhe eyenziwa futhi wanezela kungekho Aristotle kancane ohlakaniphile wabiza "ngesilinganiso motion."
Ngo Psychology, kulula nakakhulu. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, noma ukuthi ubonisa kuphela kukalwa ingqapheli. Uma sikubeka kalula, njengoba kuye kwashiwo, ngoba sonke isikhathi lihlukile. Uma siseyizingane ziningi izinto uthukuthele, ukhathele noma oxhumene umsebenzi engathandwa okuyisidina, iqalisa kancane kakhulu kunokujwayelekile, sengathi ngenhloso. Futhi okuphambene nalokho - lapho isimo esihle futhi akukho engakuphazamisi, Kwangimangaza ukuphawule izimpukane indlela buthule.
Ngakho bathi "uthando ungacingi nemini," kukhona isisekelo esingokwesayensi kakhulu - esimweni ezinjalo lokuhlushwa endorphins (injabulo i-hormone) egazini sibizwa anda kakhulu, futhi isikhathi uya ngokushesha.
Kuyini isikhathi physics? definition
Uma sithatha njengesisekelo imithetho physics classical, kuba ubuningi okuqhubekayo, okuyinto neze kunqunywa. Ukuze kube lula ekuphileni njengoba isisekelo nesilinganiso yayo esithathwayo ukulandelana ezithile izenzakalo, isib, nezikhathi ukuzungeza Zomhlaba mayelana axis awo, ilanga, noma indlela iwashi.
Kodwa fun iqala lapho sihlolisise physics relativistic. Ngokusho kwakhe, isikhathi uyakwazi ukuba banciphise ijubane noma kusheshiswe, futhi lokhu hhayi inganekwane: izenzakalo ezinjalo sihlangana nsuku zonke ekuphileni kwabo kwansuku zonke, kodwa encane ukuze singayiboni.
Uma sikubeka kalula, isikhathi kungenziwa behlisa ijubane futhi asheshisa ngaphansi kwethonya adonsela phansi. Ngokwesibonelo, phansi wokuqala phezulu futhi iwashi zokugcina ngizoya ngesivinini ezahlukene, kodwa ezimweni ezivamile, lokhu ngeke uphawule umehluko incane ngakho. Kodwa uma uwalethe ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu ke ebanikela kwesokunxele Emhlabeni kuyoba kancane.
Isikhathi. definition etemibhalo
Uma sithatha njengesisekelo umsebenzi, ke kungokudingekayo ukuthunyelwa ngesakhiwo. Njengoba empeleni, lakhiwa kusukela esikhathini esidlule kuze kube sesikhathini esizayo e eqanjiwe. Kodwa ngezinye izikhathi kusetshenziswa izindlela ezikhethekile ezifana ukufakwa uhlamvu lokugcina noma izinhlamvu.
Kuthiwani uma ukuchofoza noma esonta ku Vaz-2107 ukuziqalela? Ukulungisa kanye esikhundleni ukuziqalela Vaz-2107
A inkukhu ngehhoko izinkukhu 30 ngezandla zabo. Warm inkukhu ngehhoko laying izikhukhukazi
Iguana Green: incazelo, izithombe, izimo yeziboshwa basekuthunjweni
Buckwheat Ukudla: kungakanani ungakwazi aphonse on uhlelo kwamandla?
Azog the Defiler: i-villain ephelele kaPeter Jackson
Ukwaluka hook mata. Indlela ukudala i wathungela art into ezithakazelisayo
Ben Reyli - ukuphila nokufa we-Scarlet Spider-Man
Isihlungi Electric: izinhlobo, injongo
Kufanele ngihambe eTanis ngoSeptemba? Ukuzilibazisa, amanani, izibuyekezo zezulu nezokuvakasha
Izipho othandekayo "Valentine," ngezandla zakhe wenza izinto eziyizikhumbuzo, ubucwebe amabhokisi kanye iziphanyeko